Diego Maradona Oo Louis Van Gaal Ku Tilmaamay Shaydaan Isaga Oo Ka Cadhaysan In Aanu Radamel Falcao Si Joogti Ah Uciyaarsiin. – Cayaaraha dunida
Europe | By admin
Diego Maradona Oo Louis Van Gaal Ku Tilmaamay Shaydaan Isaga Oo Ka Cadhaysan In Aanu Radamel Falcao Si Joogti Ah Uciyaarsiin.
Halyaygii iyo tabababarihii hore ee xulka qaranka Argentina ee Diego Maradona ayaa tababaraha Manchester United Louis Van Gaal Ku tilmaamay inuu shaydaan la mid yahay isaga oo ka cadhaysan in aanu xidig ree Colombia ee Radamel Falcao siin waqti joogta ah oo uu ku ciyaaro.
Ma aha Maradona qofkii ugu horeeyay ee Van Gaal ku eedeeya inuu Falcao aamini waayay oo uu waqti siin waayay balse waxaa jiray dad badan oo hore sidan oo kale eedayn ugu soo jeediyay Van Gaal.Man United ayaa xagaagii hore Falcao amaah qaali ah kaga soo qaadatay kooxda Monaco balse Falcao ayaa ku dhibtooday inuu la qabsado Red Devils iyada oo aanu Van Gaal isaguna waqti fiican siin.
Van Gaal ayaa inta badan ka dhago adaygay inuu Falcao 90 ka daqiiqo ciyaarso.Heshiiskii amaahda ahaa ee uu Falcao ku yimid Old Traffrod ayaa halis ku jira iyada oo ay udhawdahay inuu dhamaadka xili ciyaareedkan ku laabto kooxdiisa Monaco.
Falcao ayaa Man United xili ciyaareedkan u saftay 12 kulan , laakiin qaab ciyaareedka Falcao ayaan qancinin macalinkiisa ree Holland ee Van Gaal taas oo keentay inuu kursiga kaydka fadhiisiyo.Van Gaal ayaa eedayn wayn kala kulmay rag badan oo kubbda cagta sumcad ku leh kadib markii uu Falcao ka ciyaarsiiyay kooxda da’yarta Man United.
Maradona ayaa yidhi: “Van Gaal ma aha nin dagan, wuxuu wax kasta uga dhaw yahay shaydaanka. Koobkii aduunku Colombia wuu u fiicnaa, waxaanan filayaa in qofkastaaba dareemay marka ay kubbada haysteen James Rodriguez ama Juan Cuadrado. Haddii uu Falcao joogi lahaa waxaa suurtogal ahaan lahayd in Colombia ay u dabaal dagi lahayd koobka aduunka”.
Maradona oo ka hadlaya xaalada Falcao ayaa yidhi: “Falcao wuxuu France ka yimid oo uu Enland soo gaadhay isaga oo dhaawac dhibateeyay, waxaana ahayd wax adag inuu la qabsadaa”.
Intaa kadib ayuu Maradona amaanay xidiga ay Falcao isku xulka qaranka Colombia yihiin ee James Rodriguez oo ka tirsan kooxda Real Madrid wuxuuna yidhi: “James waa ciyaartoy lugta bixidka ku ciyaara oo hiboleh, waa ciyaartoy aad ugu fiican sida ciyaartoyda lugta bidix ku ciyaara”.
Baryahan danbe ayay aad u bateen dadka sida wayn u dhaliilaya Van Gaal iyada oo dhawaan Ribery uu Van Gaal ku tilmaamay inuu yahay nin xun halka xidig hore oo uu Van Gaal macalin ugu soo ahaa Barcelona macalin uu isna ku tilaamay inuu Van Gaal qashin yahay.
Kooxda Man Utd oo hanatay koobka Europa League + Sawirro.
Sevilla oo Markii Sadexaad oo Xiriir ah qaaday koobka Europa League +Sawirro.
Isku Aadka koobka Qaramada Yurub oo la sameeyay iyo wadamo caan ah oo isku dhacay +Sawirada.